Abavelisi beMibhobho engaqhushumbayo-iTshayina-ubungqina bemibhobho yokudubula ababoneleli kunye neFactory
BGJ-b series Isiqhagamsheli-ubungqina bokudubula (tshintsha ubungakanani)
1. Ubungozi:ummandla 1&2;
2. Umoya oqhumayo: iklasi Ⅱ;
3. Ngaphakathi okanye ngaphandle;
4. kusetyenziswa ngokubanzi kwimimandla yeoli, imboni yeekhemikhali, i-spaceflight, ishishini lemfazwe njalo njalo.
5. Uphawu olunobungqina bokudubula: ExdIIGb
6. Uhlobo lomsonto: G, M, NPT
1. Iindawo ezinobungozi zoMmandla 1 kunye neZone 2;
2. Udidi II umoya oqhumayo;
3. Isetyenziswe kwi-petroleum, ikhemikhali, i-aerospace, umkhosi kunye nezinye iindawo.
BHJ series Explosion-proof isinxibelelanisi esebenzayo
2. Umoya oqhumayo: iklasi Ⅱ ;
3. Ubungozi:ummandla wama-20, wama-21 nowama-22;
4. umoya wothuli oluvuthayo;
5. Ngaphakathi okanye ngaphandle;
6. kusetyenziswa ngokubanzi kwimimandla yeoli, imboni yeekhemikhali, i-spaceflight, ishishini lemfazwe njalo njalo.
3. Isebenza kwi-IIB, i-IIC yendawo yegesi eqhumayo;
5. Isetyenziswe kwiindawo ezinobungozi kumashishini epetroleum kunye neekhemikhali, njengezixhobo zombane ezingenakuqhushumba Ikhebula elilungisiweyo laziswa ngokuthe ngqo.
BDM series Explosion-proof cable clamping sealing connector
1. Ubungozi: ulwahlulo 1&2;
2. Imimoya eqhumayo: iklasiII;
3. Ngaphakathi okanye ngaphandle.
LCNG series Explosion-ubungqina bhetyebhetye yokudibanisa umbhobho